Kuchenesa, kurapa kana kuisa utachiona inzira inoita senge yakaoma kuita, semuenzaniso, nekushandiswa kwemakemikari.
Zvakare, iko kushandiswa kwe UV mwenje mwenje inogadzira zvigadzirwa zveAcuva mhinduro yakanaka kwete chete yekumba neyehofisi, asi zvakare yakakura yekuchenesa mvura pane yacht kana mumotorome.
Mvura inongovharirwa utachiona, semhedzisiro yacho 99,9999% yebhakitiriya, mavairasi uye mamwe marwisi anobviswaizvo zvinogona kukonzera matambudziko ehutano uye izvo zvinopinda nyore nyore kuburikidza nechero echinyakare mvura firita.
Uyezve, iyo Acuva UV-LED yekuchenesa mvura masystem akaenzana muhukuru. Ivo vanotora nzvimbo diki kwazvo, saka ivo vakanakira macaravani, makambi uye pazvikepe, magwa uye yachts.
Acuva Museve 5 UV-LED pombi yemvura
Hupenyu hwebasa re10+ makore
Acuva Museve 5 UV-LED
Acuva inopa zvigadzirwa zvinoenderana nechero mhando yekushandisa. Kubva pamhando dzakasiyana-siyana dzeUV-LED yemvura yekuchenesa, unogona kusarudza zvishandiso, i.k.
Acuva Eco NX-Sirivheri UV-LED ine pombi
Rega kunetseka nezvemvura yakabhoderedzwa muyacht yako kana karavhani. Shandisa off-line mvura uye uichenese usati wanwa uchishandisa Acuva UV-LED disinfection system. Nakidzwa isina gwapa yakachena pombi yemvura muchikepe chako uye muRV yako kana imba yezororo isina mains mvura.
Kusarudza masisitimu ekuchenesa mvura Acuva UV-LED iwe unosarudza zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinopa yakachena, isina mvura mvura yeimba yako, chikepe kana mota yemba.
5 / 5 ( 4 mavhoti )